Louisa Eriksson '' Waxaan dooneynaa inaan noqono degmadii ugu horeysay ee mamnuucda xijaabka ee Sweden''
HomeWararka Maanta SomaliskaLouisa Eriksson ” Waxaan dooneynaa inaan noqono degmadii ugu horeysay ee mamnuucda xijaabka ee Sweden”
Louisa Eriksson ” Waxaan dooneynaa inaan noqono degmadii ugu horeysay ee mamnuucda xijaabka ee Sweden”
2 weeks ago Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Duqa magaalada Solfsbury, Louisa Eriksson, ayaa sheegtay inay raadinayso xayiraad la saaro xirashada indho shareerka ee dugsiyada hoose iyo sare, iskuulada waxbarashada dadka waaweyn iyo shaqaalaha dawlada hoose, taasoo ka dhigaysa Solfsbury degmadii ugu horaysay ee mamnuucda xijaabka Sweden Sida uu qoray wargayska Expressen shalay.
Erikson, oo ah afada hore ee madaxa xisbiga Dimuqraadiga Sweden, jimmie åkesson ayaa sheegtay in la heli karo wado looga gudbo diidmada maxkamada ee diidmada go, aanka ka soo baxay labo degmo oo ka tirsan Skåne.
“Dugsiyadu waa inay ka difaacaan carruurta maskax dhaqameedkii dhexe,” ayay raacisay.
Erikson ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook ku sheegtay inay rabto inay sii wado raadinta “xaquuqda gabdhaha yar yar inay yeeshaan timo qurxoon kana hortagaan takoorka galmada ee lagula kaco.”
“Waa inaan difaacno xuquuqda haweeneyda la dhibaateeyay ee xorriyadda, xuquuqda furitaanka timaheeda, iyo xuquuqda muujinta nafteeda iyadoo loo marayo xorriyadda dharka,” ayay raacisay.
Erikson ayaa hiigsanaysa in Sölvesborg ay noqoto degmadii ugu horeysay ee Sweden ee mamnuucda xijaabka. Staffanstorp iyo Skurup ayaa horay isku dayay inay mamnuucaan xijaabka iskuulada, laakiin maxkamada maamulka ayaa ka noqotay go’aankooda.
Erikson waxay sheegtay inay rajeynayso inay ka gudubto diidmada maxkamada iyadoo diirada saareysa dhanka falsafada, iyadoo tiri “xijaabka waa in loo arkaa inay qeyb ka tahay falsafada dumarka hoos u dhigaysa”. Dharka noocan ah ee caruurta yar yar ma loo qaadan karaa arin diimeed oo kaliya, mise waxay ka mid tahay falsafada lagu xaqirayo haweenka, ”ayay raacisay.
Waxay tilmaamtay inay ku salaysnaan doonto Barnaamijka Waxqabadka ee Dawlada Hoose ee Solvesbury sanadka 2019, kaasoo dhigaya in degmadu ay baarto “siyaasad dhar si looga hortago dhibaataynta haweenka.”
Erickson waxay sheegtay inay rajeynayso mamnuucida xijaabka inay dhaqan gasho sanadkan